Cawaaqib Xumada Ka dhalata Akrasia – JOORNAAL
Cawaaqib Xumada Ka dhalata Akrasia
May 8, 2017 ~ joornaal
Waa maxay sababta aanan ugu dhaqaaqin shaygii munaasabka ahaa in aan sameyno?
Sanadkii 1830 kii, qoraagii weynaa ee Victor Hugo (Wuxuu ahaa Gabyaa, Qoraa, Ruwaayad soo saare, iyo aartiiste caan ah) waxaa la soo daristay dhibaato culus. Labo iyo toban bilood ka hor wuxuu madbacada buugaagtiisa daabacda u balanqaaday inuu buug cusub qori doono. Sidaas ayay heshiis ku galeen asaga iyo maktabada buugaagtiisa daabacda isla markaana uu qalinka ku duugay inuu keeni doono buug uu ugu magacdaray The Hunchback of Notre Dame. Hugo buugii ma uusan qorin, wuxuu ku mashquulay inuu maaweeliyo saaxiibadiis iyo martidiisa iyo arimo kale oo asaga khaas ku ah. Maktabadii markay aragtay xaalka Victor Hugo iyo sida uu wax ku wado waxay ku yiraahdeen buuga waa in aad noo keenta bisha feberaayo ee sanadka 1831. Markaas waxaa ka harsan waqtigaas loo cayimay in ka yar lix bilood. Ogow weli ma uusan xataa bilaabin buuga qoristiisa.
Si uu arintaas u xaqiijiyo, Victor Hugo wuxuu aruuriyay dharkiisii oo dhan oo uu meel ku soo qafilay intaan ka ahayn bijaamahii uu ku seexanaayey. Ileen guriga dhar uu uga boxo mahaystee, waxaa qasab ku noqotay inuu buugii qoro. Wuxuu buugii dhameeyey ayadoo waqtigii lagu balamay ay ka dhimantahay labo usbuuc, buugii wuxuu daabacay bishii Janaayo 1831 dii. Wuxuu ku dhameeyey lix bilood.
Hadaba waxaa cashar ka qaadasho mudan sida uu Victo Hugo ula dagaalamay caajiskaas (Procrastination).
Arintaan Caajiskaa waa mid qadiim ah
Caajisnimada ma cusba, waa wax qadiim ah. Binuu aadmigu qarniyaal badan ayay arintaan la xarbinaayeen. Sidaas daraadeed Qabiirkaan Victor Hugo oo intaas oo buugaag ah qoray, intaas oo gabay qoray, intaas oo ruwaayadood alifay hadana wax badan sawiri jirey, isla markaana ahaa nin wax soo saar badan arintaan Caajisnimada saameyn weyn ayay ku yeelatay sida ka muuqata taariikhdiisa, ilaa uu ka gaaray heer uu dharkiisii qariyo.
Arintaan caajisnimada xataa dadkii Griiga ahaa iyo fiilosoofyadoodii (Greek Philosophers) sida Socrates iyo Aristotle ayaa waxaa ay u bixiyeen magaca la yiraahdi Akrasia. Hadaba Giriigii(Greeks) hore waxaa ay eraygaas Akrasia ku qeexeen sidan “Akrasia waa in aad sameyso wax ka soo horjeed ama lid ku ah waxa aad ogtahay in ay ku jirto ayaatiinkaaga iyo mustaqbalkaaga” Waa marka aad sameyneyso shay lid ku ah aayatiinkaaga adigoo ogsoon. Tusaale: Waxaa kuu haboon in aad aqrisato maadada lagaa rabo iskuulka laakiin waxaad ku mashquulsantahay Facebook iyo wax kale oo faa iido kaa soo galeyn. Sidaas daraadeed Arkasia waa waxa kuu diidan in aad raacdo barnaamijka kuu degsanaa oo u weecato wax madadaalo gaaban kuugu jirto markaas. Muxuu Victor Hugo balan ugu qaaday inuu buugan qoro haddana uu mar walba dib ugu dhiganayey? Maxaanse anagu qorshe u dhiganaa kadibna aan kaga caajisnaa oo meesheedii aanan ka soo qaadin?
Maxaan Qorshe u sameynaa laakiin iskaga deynaa talaabadii lagu gaari lahaa?
Markii ay baareen culumada baratay dhaqaalaha iyo dhaqanka dadka (Behavioral Economics) waxaa ay arintaan u bixiyeen waxa afka ingiriiska lagu yiraahdi “time inconsistency.” Taas oo ah in maskaxda binuu aadmigu ay qiime weyn saarto waxa markaa ama xiliga la taaganyahay ay faa iido ka helayso, marka loo babac dhigo wax mustaqbalka laga faa iidaayo. Tusaale: Waxaad rabtaa in aad is caateyso, caatadu waa qofka aad noqoneyso mustaqbalka ee qurxoon, laakiin waqtiga hadda la joogo waxa faa iido aad ka heleyso oo ku raaxaysanayso waa cuntada ku hortaal. Sidaas daraadeed maskaxdu waxay dooraneysaa in ay cuntadaa iska cunto iskana hilmaanto quruxdaas mustaqbalka ah. Marka waxaa mar walba tartan ku jira qofka aad markaas tahay iyo qofka aad rabto in aad mustaqbalka noqoto. Haddii aan tusaale kale ku siiyo, in aad noqoto dhaqtar waa arin u fiican mustaqbalkaaga oo waxaad noqoneysaa nin ama gabar dadka wax tarta markii aad shan sano iyo wax kabadan aad soo wado wax barashada. Laakiin hadda waxaad tahay qof raba inuu saaxiibadiis la ciyaaro, kaftan, banooni iyo wixii la mid ah ayaa ku horyaal. Sidaas daraadeed naftu waxay kugu jirabeysaa in aad iska raaxeysato dibna u dhigato qofkaas doctor ka ah ee mustaqbalka aad noqon lahayd.
Markii cilmi baaris dheer la sameeyey waxaa la ogaaday in dadka wax muhiim ah dunidaan meel sare ka gaaray in ay yihiin intooda badan dadka dib u dhigan kara farxada iyo in ay naftoodu waxa ay hadda jeceshahay ay yiraahdaan maya. Tusaale: labo wiil ayaa waxay haystaan telefoono xoogaa yara qadiim ah, waxaa soo wada gashay midkiiba $500 oo doolar. Mid wuxuu ku soo gatay telefoon cusub waayo wuxuu arkay in naftiisu ku yara raaxeysaneyso telefoonkaas cusub. Kii kale wuxuu fiiriyay in telefoonkiisa duqaa uu weli fulinayo wuxuu u baahnaa, isla markaan wuxuu is yiri lacagtaan xoogaa ganacsato ku darso. Labadaas wiil mid weligiis wuxuu ahaan doonaa faqri, midna dad badan ayaa u shaqeyn doona oo haddii uu doono mustaqbalka wax ku adag ma noqon doonto inuu asagu noqdo kan keena taleefoonada waayo wuxuu bartay sida dib loogu dhigo waxa naftu ar rabto markaas oo lagu badalo wax nafta mustaqbalkeeda u fiican.
Haddaba ma jiraan siyaabo arintaan caajisnimada (Akrasi) wax looga qaban karaa?
Waxaa jira sadex siyood oo aad kaga guuleysan karto caajisnimadaan:
Waxaad aas aastaa talaabooyinkaaga mustaqbalka
Markii uu Victo Hugo dharkiisa meel ku soo xiray si uu maankiisa iyo muruqiisa wax qorid kaliya ugu mashquuliyo waxa uu sameynayey waxa ay culimada saykoolajigu (psychologists) ugu yeeraan “commitment device.” Taas oo ah istiraatiijiyad aad ku hormarineyso camalkaaga taas oo aad sameyneyso caqabado kuu diidaya in aad ka weecato waxa aad rabto in aad sameyso, ama mid kugu kalifeysa qaraamaad aad bixiso haddii aadan sameyn wixii aad rabtay in aad sameyso.
Tusaale ahaan. Haddii aan rabo in aan misaan lumiyo oo caatoobo waa in aanan guriga keensay sokorta, buskudka, macmacaanka iyo wax kasta oo ii keeni kara in aan si sahlan isaga cuno anigoo iska fadhiya. Waxaan ka saarayaa telefoonkayga Facebook iyo Whatsapp si aanan ugu mashquulin oo aysan waxbarashadeyda iigaga habsaamin.
Waxaad xiri kartaa telefoonkaaga saacadaha aad wax aqrisaneyso oo waxaad daareysaa kolkaad dhameyso wax aqriska.
Waxaad yareysaa caqabadaha kugu keeni kara in aadab bilaabin
Waxa adag ma ahan hawsha qabashadeeda ee waxa adag waa bilaabida arintaan. Tusaale: Waxaa adag in aad miiska fariisato marka hore oo aad buuga kala furto ee ma adka markaad kala furto in aad buugaas aqrisaa ama aad ka shaqeysaa su’aalaha.
Sidaas daraadeed waa in aad is bartaa in aad wax walba bilowdo oo aad isku qasabtaa maalin kasta in aadan ka caajisin. Waxaad qasab isaga dhigtaa in aad fariisato oo aad bilowdo shayga xataa ha ahaato 5 daqiiqo oo kaliya. Adiga ayaa is arkaya adigoo wada mudo dhowr saacadood ah shaygii aad is tiri bal yaanan noqon nin aan bilaabin arintee bal aan shan daqiiqo kaliya geliyo maanta.
Waxaad sameysaa istiraajiyad fulinta
Waxaad tiraahdaa maalin walba saacadaas iyo meeshaas waxaan ku qabanayaa arintaas. Waxaad u dhaqmeysaa qof balan leh oo kale oo saaxiibadaa iyo facebook iyo wax walba waxaad ku leedahay waxaan leeyahay balan. Laakiin balantu waa in aad wax aqrisato, luuqad ingiir barato oo aad wax ka qabato waxa wax ku oolka ah adigoo la dagaalamaya in maskaxdaadu ay kugu kalifto in ay ku garab mariso wixii mustaqbalkaaga u fiicnaa.
Waa muhiim in aad sameysataa jadwal ama schedule aad wax walba oo muhiim ah aad ku qabaneyso. Waa in aad telefoonkaaga alarm gashataa markii ay yeertana aad wax walba faraha ka qaadaa aan ka ahayn shaygaas muhiim ka ah.
La dagaalanka Akrasia
Waa sida maskaxdeenu ay u sameysantahay oo waxaa ay jeceshahay waxa ay markaa ku raaxeysaneyso. Ma jecla waxa mustaqbalka la xiriira ee aad ogtahay in aad mustaqbalkaaga ku najaxeyso. Waxay rabtaa sheeko baraleey iyo in ay waqtiga ku dhameysato in ay Facebook fiirfiiriso oo “Likes” ay wax walba saarto ayadoo kaa jeedineysa ama kaa mashquulineysa in aad noqoto doctor, mid luuqadaha yaqaan, mid macalin noqda, mid engineer ah iyo wixii la halmaala.
Aristotal wuxuu yir waxaa Arkasia cagsi ku ah waxa layiraahdo enkrateia taas oo ah in aad yeelato awood aad kaga adkaato naftaada. Taas waxaad ku gaari kartaa in aad isticmaasho sadexda istiraatiijiyadeed ee aan kor ku soo xusay.
‹ Previous7 shay oo nololosha farxada ka qaada
Next ›Jadwal ma leedahay